Ithegi: ukoneliseka kwabathengi | Martech Zone
Ithegi: ukoneliseka kwabathengi
Indlela yokuphumelela abaThengi abaBuyayo
NgoLwesibini, Oktobha 8, 2019 NgoLwesibini, Oktobha 8, 2019 Douglas Karr
Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwishishini elitsha okanye elimiselweyo kukuqinisekisa ukuba banomvuzo ongaguquguqukiyo. Nokuba yeyiphi na ishishini okulo, ukubuyisa abathengi yeyona ndlela ilungileyo yokuseka ingeniso ezinzileyo. Inxalenye yendalo yoku, nangona kunjalo, kukuba abathengi baya kulahleka ekuhambeni kwexesha ukuya kulwa. Ukuphelisa ilahleko kwi-churn, ishishini linokwenza izinto ezimbini: Ukufumana abathengi abatsha Sebenzisa izicwangciso zokubuyisa ezindala. Ngelixa zozibini
Kwityeli lesibini, i-Salesforce yaphononongwa ngaphezulu kwe-5,000 yabathengisi kwihlabathi liphela ukuqonda izinto eziphambili ngo-2015 kuzo zonke iindlela zedijithali. Nalu ushwankathelo lwengxelo epheleleyo onokuzikhuphela kwi-Salesforce.com. Ngelixa eyona mingeni iphambili kushishino luphuhliso olutsha lweshishini, umgangatho wezikhokelo, kunye nokugcina isantya kwitekhnoloji, indlela abathengisi abalusebenzisa ngayo uhlahlo-lwabiwo mali kunye nokulandelela inkqubela phambili inomdla ngokwenene: Iindawo ezi-5 eziPhezulu zoThengiso oluThengisiweyo loTyalo-mali kwiNtengiso yezeNtlalontle